लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सम्बन्धी मधुसुदन अधिकारीसगको अन्तरवार्ता | Business TV Nepal
भारतले नोभेम्बर दुईमा जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको भूमि समेटिएपछि त्यसमा नेपालले विरोध ग¥यो । कुटनीतिक नोट समेत पठायो तर त्यसको जवाफ भारतले दिन चाहेन् । तर भारतले लिपुलेक क्षेत्र हुँदै चीनको मानसरोबर जाने सडक बनाएपछि नेपालमा विरोध भयो । नेपाल सरकारले फेरी कुटनीतिक नोट पठायो । तर त्यसको आधिकारीक जवाफ नदिई भारतीय सेना मार्फत अभिव्यक्ति दिन लगायो । त्यसपछि नेपालले आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी ग¥यो । १८१६ को सुगौली सन्धी लगायतका प्रमाणहरुलाई आधार मान्दै नेपालले आफ्नो नयाँ सीमा नक्सा जारी गरेको छ । जसमा भारतीय पक्षले विरोध गरेको छ । तर दुईपक्षिय वार्ताको लागि अझै कुनै प्रयास भएको देखिदैन् । नेपाल तथा भारतका मिडियामा विभिन्न प्रमाणहरु आइरहेका छन् । के ती प्रमाणहरु सही छन? नेपालले जुटाएका प्रमाणहरु कत्तिको बलिया छन ? यिनै विषयमा केन्द्रीत भई लामो समय नापी विभागमा काम गर्नुभएका सहरी विकास मन्त्रालयका वर्तमान सचिव मधुसुदन अधिकारीस“ग गरिएको कुराकानी ।